ကမ္ဘာတစ်လွှားက ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် ရေပန်းရုပ်ထုများ – Cele Channel
ကမ္ဘာတစ်လွှားက ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် ရေပန်းရုပ်ထုများ
Posted on February 5, 2018 Author Myo Min Htet	Comment(0)
သူတို့ကိုအနှောက်အယှက်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နံပါတ်တစ်ခုကို ဖုန်းနဲ့စာပို့ရပါတယ်တဲ့။ဒါဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ့ရုပ်ထုကြီးတွေက ရေပန်းတွေကိုိ ဒီတိုင်းလွှတ်နေရာကနေ စာထဲကစကားအတိုင်း ကွေ့ကာဝိုက်ကာရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာလုံးရေအကန့်အသတ်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီ လူကြီးတစ်ယောက်အန်နေတဲ့ပုံရှိတဲ့ ရေပန်းရုပ်ထုကြီးကတော့ လန်ဒန်မှာတည်ရှိတာပါ။
ဒီိရေသူမပုံစံရေပန်းရုပ်ထုကြီးက အီတလီနိုင်ငံ ဘိုလော့နာမှာတည်ရှိပါတယ်။
ကြီးလိုက်တဲ့ Water Fountain ကြီး။
ဒီ သွေးရောင်လွှမ်းတဲ့ရေတံခွန်ကြီးကတော့ UK နိုင်ငံ Swensea မှာတည်ရှိပါတယ်။
မြင်​သူတိုင်း ဆွံ့အသွား​စေမယ့်​ မင်္ဂလာပွဲများ
မြင်​သူတိုင်း ဆွံ့အသွား​စေမယ့်​ မင်္ဂလာ ပွဲများ ပုံလေးတွေသာ ကြည့်လိုက်ပါတော့ ကွန်ဒုံး မင်္ဂလာ ၀တ်စုံ
Posted on October 24, 2017 Author Cele
တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာမှာ လူပျိုကြီးကိုကြာရိုးဆိုတာရှိပါသည် ။ ထိုရွာမှာပဲ အရမ်းကိုရှက်တတ်ပြီး အမူလွန်သည့် အပျိုကြီးမစံပယ်ဆိုတာလည်းရှိသည်။လူပျိုကြီးကိုကြာရိုးက မစံပယ်ကို သဘောကျနေ၏ ။ သို့သော်လည်း ဖွင့်လည်းမပြောရဲပေ ။ မည်သို့မည်ပုံ ပိုးပန်းရမှန်းမှန်းလည်း မသိဘူးဖြစ်နေသည် ။ သည်လိုနှင့် ရွာကသူကြီးသား ဖိုးချစ်တစ်ယောက် မြို့ကျောင်းပိတ်ရက် ရွာပြန်လာချိန်တွင် လူပျိုကြီး ကိုကြာရိုးကြီး၏ ခံစားချက်များကို သိပြီးနောက် လူပျိုကြီးနှင့်မစံပယ်အဆင်ပြေအောင် ကူညီပေးလိုက်ရာ လူပျိုကြီးကိုကြာရိုးနှင့် မစံပယ်တို့နှစ်ယောက် ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြပါတော့သည် ။ ဖိုးချစ်လည်း ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်၍ မြို့သို့ပြန်သွားပါတော့သည် ။ ဖိုးချစ်ပြန်သွားတဲ့နေ့မှာပဲ လူပျိုကြီးကိုကြာရိုးနှင့်မစံပယ် အပြင်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ချိန်းတွေ့ဖြစ်ကြလေသည် ။ ချစ်စကားတွေသီကုံးနေစဉ်မှာပဲ အပျိုကြီးမစံပယ်တစ်ယောက် ရုတ်တရက်မည်သို့မှမအောင့်နိုင်စွာ လေလည်လိုက်မိ၏ ။ ထိုသို့လေလည်မိသွားသည်နှင့် အပျိုကြီးမစံပယ် တစ်ယောက် ရှက်လွန်းလွန်း၍ တချိုးတည်းလစ်ပြေးသွားပါတော့သည် ။ […]
Posted on January 18, 2018 January 18, 2018 Author Myo Min Htet
ဘယ်လိုနားလည်ပေးရမှန်းတောင်မသိ…. တစ်ချို့အရာတွေ ကြည့်လိုက်ရင် မျက်စိလည်ပြီးအရမ်းထူးဆန်းလွန်းလို့ ဘာကြီးလဲလို့ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုတော့ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုတွေဖြစ်ရတာလဲ…သင်ရော အဖြေရှာနိုင်လား ကြည့်ကြည့်ပါဦး! ဘာလို့လဲ.. ဘာကြောင့်လဲ… ဘယ်လိုလဲ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ပါကင်ထိုးနည်း ကိုယ်ပျောက် စက်ဘီး အစမ်းထွင်တာ.. လွန်သွားတယ် မီညှောင်.. ပုလင်းထဲ ဘယ်လိုရောက် ? ဘယ်လိုလဲကွ လာမရယ်နဲ့နော်… စိတ်တိုနေတယ် ဟန်ချက်ညီခြင်း အနုပညာ မိမိမှာ အိမ်မှာနေပြီး အားယားနေသောအခါ ဘယ်လို ခရုတွေလဲ ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်နားသိမ်းရမှန်းမသိဖြစ်နေရင် ပြောစရာ စကားမရှိ စက်ဘီးအသစ်လေး ပျောက်သွားမည်စိုးသောကြောင့် အလုံခြုံဆုံးနည်းကိုတီထွင် ဒီကား ပိုင်ရှင်ကိုတော့ လေးစားတယ် အောက်က လူကြီးကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ် source buzzy